काठमाडौं/ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा जानकी मन्दिरमा राखिएको नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको आकार र स्वरुप फरक भएकोबारेमा सम्वद्ध अधिकारीहरुसँग स्पष्टिकरण मागेको छ । संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय झण्डाको स्वरुप र आकार फरक पारेर राखिनु गम्भीर गल्ती र संविधान विपरीत रहेको भन्दै प्रदेश २ का मुख्य […]
दियोपोस्ट संवाददाता : धादिङ, ३१ वैशाख । धादिङको सिद्दलेख गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्षले आफ्नी बुहारीलाई जागिर लगाउनका लागि एक शिक्षिकालाई जागिरबाट बर्खास्त गरेको खुलाशा भएको छ । सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नम्बर २ नलाङका वडाध्यक्ष कमल गुरुङले नलाङ पात्ले माविमा बाल शिक्षिकामा कार्यरत सिता अर्याललाई हटाएर आफ्नी बुहारी निर्माया गुरुङलाई बाल शिक्षिकाको रुपमा नियुक्त गरेका हुन् । ‘म […]
सुनिल चौधरी झुम्का,बैशाख ३० । छुवाछुतको बिकृतिले समाजमा बिभेद र हिंसाजन्य घटनाहरु भईरहदा रामधुनी ४ मानपुरटोलमा आईतवार बाहुन क्षेत्रिले गर्ने संस्कार अनुसार बाहुनको घरबाट एक दलित छोरीको बिवाह सम्मपन्न भएको छ । परिवारको सदस्य जस्तै ७ बर्षको उमेर देखिनै मानपुरटोल निवासी बिदुर चौलागाईले पालन पोषण गरेको राधा मुसहरलाई मोरंग वयरवनका केटा लल्कु मुसहर संग लगन […]
नायिका तथा मोडल रिमा विश्वकर्माको बैवाहिक सम्बन्धमा फाटो आएको छ । उनका श्रीमान रोवर्ट विकले मोरंग स्थायी घर भएकी बर्षा रसाईलीसँग लगन गाँठो कँसेपछि रिमासँगको वैवाहिक सम्बन्धमा फाटो आएको खबर बाहिर आएको हो । २ वर्ष अगाडी दुई परिवारको सहमतीमा बिवाह गरेका रिमा र रोवर्टको बैवाहिक सम्बन्ध किन टुंगियो त ? जान्नुस् तीन कारण : […]
एजेन्सी। आत्महत्या गर्ने मानिस सँधै हतारमा हुन्छन् । किनकी उनीहरुले भोलीलाई नसोची आत्महत्या गर्ने गर्छन् । तर भारतकी एक महिलाले ३ वर्ष लगाएर सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गरेकी छिन् । भारतको भोपालकी रेणुका मित्तल नाम गरेकी महिलाले वर्षौ लवगाएर सुसाइट नोट लेखेको र नोट लेखिसक्दा नसक्दै आत्महत्या गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले जनाएको छ । उनको […]
अमेरिका नेपाल अन्तरजातीय बिबाह गर्दा अाफ्नै परिवारले मार्न खाेजे , छरछिमेकले घाउ निकाला गर्न खाेजे! यो एक्काईशौं शताब्दीमा पनि किन मान्छे मानव जस्तो भएको छैनन? नेपाली समाजमा जातीय र छुआछूतको कुरा कहिलेसम्म जारी हुने हो? मान्छेको जीवनशैलीमा धेरै परिवर्तन आए पनि ग्रामीण गाँउ घरमा यस्तो जातीय भेदभावको चलन जिउदै रहेको हामी देख्न सक्छौँ, यहा यस […]
काठमाडौं, मंसिर १४ – दुवई भनेर ओमान पुर्‍याइएकी सिन्धुपाल्चोककी साङ्मो लामा घर फर्किनुभएको छ । ओमान पुगेर समस्यामा परेकी साङमोका बारेमा उज्यालोमा खबर प्रकाशित भएको सात महिनापछि साङ्मो नेपाल फर्किनुभएको हो । सिन्धुपाल्चोकको गोल्चेकी साङ्मो लामा १८ वर्षकी हुँदा आफू भन्दा ५ वर्ष कान्छा सुशील लामासँग विहे भयो । त्यतिबेला उहाँ विद्यालयमै पढ्नुहुन्थ्यो । अनि […]
पतिले भने– ‘फोटो शेयर गरिदिन्छु’, पत्नीले गरिन् आत्महत्या
इन्दौर, मंसिर १४ । पतिले ‘ह्वाट्सएप’ मा एउटा तस्वीर सार्वजनिक गरिदिन्छु भनेर ठट्टा गरेलगत्तै पत्नीले आत्महत्या गरेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । भारतको उज्जैनमा चर्म रोग विशेषज्ञ डा. नलिन पाटनीले पत्नीसँग ठट्टा गर्दै तस्वीर सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार उनकी पत्नीको अघिल्लो दाँतमा समस्या आएपछि मंगलबार दुवैजना एक दन्त क्लिनकमा पुगेका थिए […]
राजधानी छिर्दा मसँग सपनाका चाङ थिए । प्रवेशिका परीक्षा उतिर्ण गरेर राजधानीको प्रवेश गर्दै गर्दा मैले सोचेकी थिएँ, ‘कुनै दिन राजधानीबाट ठूलो न्छे बनेर आफ्नो गाउँ फर्किने छु ।’ थाहा थियो, सपना सप्पैका पुरा हुँदैनन् । जसले आफूले देखेका सपनामा छाँद हाल्दै अगाडि बढिरहन्छ उसैले सपनालाई विपनामा परीणत गर्न सक्छ । अक्सर म सपना देख्ने […]
– रवि मानन्धर पाल्पाबाट राजधानी फर्कने क्रममा तनहुँको दमौलीछेउको एउटा दृश्यले ध्यान खिच्यो तर फोटो खिचिनँ । झन्डै एक किलोमिटर बढेपछि मन मानेन । आखिर को थिए ह्विलचेयरमा बस्ने र ठेल्ने बालबालिका ? अनि, फनक्कै फर्किएँ । राजमार्ग किनारमै रहेछन्, उनीहरु । तस्बिर खिचेँ र गफ गर्न खोजेँ । तर, तीनै जना नि:शब्द रहे । बाबुआमाको […]